Muqdisho: Geerida qoys sumoobay oo gaartay 7 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Qoys dhawaan ku sumoobay maado aan la garaneyn, lagana keenay tuulo hoos timaadda degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa geeridoodu gaartay 7 ruux, kadib markii xalay ay Isbitaalka Keesaney ee Muqdisho ku geeriyoodeen labo carruur ah oo qoyskaas ka mid ahaa.
Sheekh C/qaadir Soomow oo ka mid ah ehellada qoyskaan sumoobay ayaa saaka warbaahinta u sheegay in xalay gabar iyo wiil ka mid ahaa dadkaas sumoobay ay ku geeriyoodeen Isbitaalka Keysaney.
Dadka suntaas horay ugu geeriyooday ayaa ahaa 5 qof oo ay ku jirtay hooyadii qoyska, 2 ka mid ah ayaa ku geeriyooday goobtii ay ku sumoobeen, 1 ka mid ah wuxuu geeriyooday intii Muqdisho loo soio weday, halka 2 kale ay horay ugu geeriyoodeen Isbitaalka.
Waxaa hadda Isbitaalka Keysaneyn lagu dawenayaa 3 qof oo kale oo ay ku jirto Islaan waayeel ah oo ah hooyada aabaha leh qoyska sumoobay oo isagu caafimaad qaba.
Sheekh Soomow ayaa baaq kale u diray dowladda Soomaaliya iyo cid kasta ee wax u qaban karta 3-da qof ee soo haray ee yaalla Isbitaalka Keysaney, kuwaasoo uu sheegay iney u baahan yihiin daryeel caafimaad oo dheere ah.
Todobaadkii hore ayaa qoyskaani mar qura soo dhaceen, iyadoo la sheegay iney sumoobeen wax ay cabeen ama ay cuneen.